Motorola Moto G30 iyo Moto E7 Awoodda: dillaacyada, soo dejinaya iyo inbadan | Androidsis
Motorola Moto G30 iyo Moto E7 Power: Leaks, Renders and More
Aaron Rivas | | Motorola, Noticias
Daahfurka Moto G30 iyo Moto E7 Power waa soo dhowdahay. In kasta oo aan la filayn in moobiilladaas la soo bandhigi doono isla waqtigaas, haddana wax walba waxay muujinayaan in muddada u dhexeysa soo bandhigid kasta ay gaabi doonto. Taa baddalkeeda, labaduba waxay ku dhowyihiin in laga bilaabo suuqa, sidaa darteed waxaa horay u jiray hawo cayiman oo laga filayo aaladahaan.
Kahor intaanan ogaan taariikhda siideynta saxda ah ee labadaba, waxaan horeyba u ogaanay faahfaahin badan oo ku saabsan astaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee lamaanahan. Raadiyayaasheeda ayaa sidoo kale la daadiyay, iyo sidoo kale liistada Moto E7 Power oo ka soo baxday Geekbench, oo ah barxad moobiil ah oo tijaabisay oo lagu sii daayay iyada oo la adeegsanayo magac koodh ah oo leh Mediatek processor chipset.
Wax kasta oo aan ka ogaanno Motorola Moto G30 iyo Moto E7 Power illaa hadda
Aan ku bilowno ka Moto G30's Motorola. Qalabkan, sida ku xusan wararka xanta ah iyo xogaha soo ifbaxay waqti yar ka hor, wuxuu yeelan doonaa shaashadda teknolojiyada IPS LCD ee leh xagal dhan 6.5 inji. Xallinta tani waxay noqon doontaa HD +, laga yaabee 1.600 x 720 pixels. Intaa waxaa sii dheer, naqshadeynta gudidu waxay noqon doontaa mid caadi ah: heer-biyood qaabeeya oo leh jajabyo fudud iyo garka xoogaa loogu dhawaaqo.
Bixiyeyaasha Moto G30 ee xaday
Dhinaca kale, waxaa la sheegay in boosteejada moobiilka ee lagu xareyn doono daboolka taleefankan wuxuu noqon doonaa Qualcomm's Snapdragon 662, oo ah sideed-xuddun oo ku shaqeysa heerka ugu badan ee cusbooneysiinta ee 2.0 GHz, halka cabirkeeduna yahay 11 nm. Tan waxaa lagu daraa 6 GB RAM ah iyo 128 GB oo keydinta gudaha ah, in kasta oo warbixin kale oo duug ah ay muujineyso in qaabeynta xusuusta ay noqoneyso 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo ROM ah.
Batariga Moto G30 wuxuu yeelan doonaa awood 5.000 MahIn kasta oo aan laga sheegin wax ku saabsan iswaafajinta lacagta degdegga ah ee ka jirta. Weli, waxaa la sheegay inay awood u yeelan doonto in lagu soo dalaco adoo adeegsanaya dekedda USB-C, halka sidoo kale ay jiri doonto jajab sameecadda dhegaha ee 3.5mm, akhristaha faro gadaal, iyo isku xirnaanta NFC
Nidaamka kamaradaha ugu weyn ee mobilka ayaa yeelan doona a 64 MP afar geesood ah oo leh muraayad ballaadhan iyo laba 2 dareemayaal MP ah oo loogu talagalay tallaalada makro iyo bokeh. Rasaasta hore waxay noqon doontaa 13 xalka MP.
Iyadoo la tixgelinayo Moto E7 Awood, waxaa sidoo kale jira macluumaad la mid ah oo la taaban karo. Waxaana la sheegay in qaabkani sidoo kale yeelan doono naqshad shaashad ah oo leh dhibic qaab dhibic biyo ah. Tani sidoo kale waxay noqon doontaa teknoolojiyadda IPS LCD waxayna yeelan doontaa cabir dhan 6.5 inji. Dhanka kale, qaraarku wuxuu noqon doonaa HD +.
Bixiyeyaasha xaday Moto E7 Power
Daqiiqad ayaa la rumaysnaa in qaabkani la iman doono Mediatek's Helio G25, laakiin waxa ugu dambeeyay ee Geekbench ay tilmaamayso waxa ku saabsan ayaa tilmaamaya Helio P22 wuxuu noqon doonaa gabal ku quudin doona xoog. Tan waxaa lagu kabi doonaa 4 GB RAM xasuusta iyo 64 GB meel kaydinta gudaha ah, in kasta oo la sheegay inay sidoo kale jiri doonaan nooc ka duwan 2 GB oo RAM ah iyo 32 GB oo ah xusuusta gudaha; Ma garanayno halkaan haddii hal nooc oo keliya la heli karo, ama haddii uu ku imaan doono labada nooc ee xusuusta, laakiin waxaa hubaal ah inuu jiri doono booska kaarka microSD ee ballaarinta. Intaas waxaa sii dheer, waxay la imaan doontaa batari awooddiisu dhan tahay 5.000 Mah.
Nidaamka kamaradaha Moto E7 Power wuxuu ku yimaadaa mid labalaab ah oo leh muraayad 13 MP ah iyo toogashada labaad ee 2 MP. Dareeraha sawir-qaadaha ayaa noqon doona 5 MP.
In kasta oo aysan weli faahfaahin ka bixin qiimaha suurtagalka ah ee Motorola Moto G30, Waxaa la sheegay in Moto E7 Power uu ku dhowaad 150 euro ka noqon doono Yurub. Waxyaabaha kale ee la soo sheegay sidoo kale waa isku xiraha 3.5 mm, oo aanan filaynin in la arki karo maqnaanshihiisa maadaama aan ka hadlayno qalab rakhiis ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Motorola Moto G30 iyo Moto E7 Power: Leaks, Renders and More
Ka caawi saddexda dhallinta yar adduun aan loo dulqaadan karin ee 'Reset Earth'
Samsung Galaxy S21 waxay heleysaa cusbooneysiin cusub oo ku saabsan hagaajinta cilladaha iyo hagaajinta